မိုက်ဒ်နီရီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မိုက်ဒ်နီရီယမ် (Meitnerium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဒြပ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ Iridium(Ir)ကဲ့သို့ အုပ်စုနံပါတ် (၉) ရှိ အခြားသော ဒြပ်စင်များနှင့်ဆင်တူနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Mt ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၉ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဩစတြေးလျ ရူပဗေဒပညာရှင် Lise Meitner မှ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် IUPAC မှ Meitnerium ဒြပ်စင် ဟုအတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
syn 0.4 s α 9.76 270Bh
syn 0.6 s α 9.71 272Bh
syn4s α 9.6 274Bh
syn 67 s? α 8.77 278Bh
Meitnerium ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ၃.၈ မီလီစက္ကန့်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals" (2011). Physical Review B 84 (11). doi:10.1103/PhysRevB.84.113104. Bibcode: 2011PhRvB..84k3104O.
↑ Thierfelder, C. (2008). "Dirac-Hartree-Fock studies of X-ray transitions in meitnerium". The European Physical Journal A 36 (2): 227. doi:10.1140/epja/i2008-10584-7. Bibcode: 2008EPJA...36..227T.
↑ "Hartree–Fock–Roothaan energies and expectation values for the neutral atoms He to Uuo: The B-spline expansion method" (2009). Atomic Data and Nuclear Data Tables 95 (6): 836. doi:10.1016/j.adt.2009.06.001. Bibcode: 2009ADNDT..95..836S.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုက်ဒ်နီရီယမ်&oldid=518133" မှ ရယူရန်